Redmi Note 7 waxay heleysaa xasilloonida MIUI 11 ee adduunka | Androidsis
Taasi waa sida ay tahay. Sida war wanaagsan, adeegsadayaasha Redmi Note 7 ayaa la helayay casriyeynta barnaamijka maalmihii ugu dambeeyay kaas oo ku daraya nooca ugu dambeeya ee lakabka qaabeynta Xiaomi, taas oo ah MIUI 11.
Moodooyinka ka da'da weyn tan (sida Redmi 4, tusaale ahaan), oo la bilaabay bishii Jannaayo ee sannadkan, ayaa helay qalab horay u ahaa qayb ka mid ah jadwalka shirkadda. Waxaad hadda dib u eegi kartaa ogeysiisyada ama qaybta ah Ku saabsan telefoonka> Cusboonaysiinta nidaamka on your Redmi Note 7 - kiis aadan horey u helin - inaan ku siiyo ciyaaro habka loo soo dajiyo oo loo rakibo loona helo dheefaha ay ku dareyso.
Cusboonaysiinta waxay la socotaa tan horumarin ah, sidaad hubaal u qiyaasi karto. Waxaan ka hadleynaa xirmo qalab adag oo adag oo adag, in kasta oo uusan miisaankeedu aheyn 1 GB, 818 MB oo cabir ahaan u leh qalabkan ayaa kaa dhigi doonta inaad laba jeer ka fikirto ka hor intaadan ku soo dejinin xirmada macluumaadka ee bixiyahaaga. Taasi waa sababta, ka hor inta aan la bilaabin soo dejinta iyo habka rakibidda, waxaan kugula talineynaa in taleefanka casriga ahi ku xirnaado shabakad xawli leh oo Wi-Fi ah, si looga fogaado isticmaalka aan loo baahnayn ee baakadka xogta. Xusuusnow sidoo kale inaad haysato mobilka leh heer batteri heerkiisu fiican yahay.
Balastarka amniga ayaa lagu cusbooneysiiyaa OTA cusub. Laf ahaanteeda, waa la cusboonaysiiyay lana hagaajiyay Nofeembar 2019, waqtiga aan ku jirno. Tani waxay xaqiijineysaa inaad ka badbaado khataraha ugu dambeeya marka lagu daro kuwa jira. Dhanka kale, waxay cusbooneysiineysaa naqshadeynta isdhexgalka waxayna ka dhigeysaa mid aad u yar oo raalli ka ah isha, iyo sidoo kale hagaajinta iyo hagaajinta qaybaha kale ee bilicsanaanta iyo waxqabadka.
Laba kale oo aad u xiiso badan oo aanan horay uga helin MIUI 10 ayaa ah Muuqaalka Nolosha Dijitaalka ah iyo xulashooyinka shaashadda cusub. Iyada oo loo marayo muuqaalka koowaad, waxaad la socon kartaa waqtiga isticmaalka Redmi Note 7 iyo barnaamijyadooda, si aad u yareysid si aad u wanaajiso caafimaadkeena iyo caadooyinkeena. Qaabka cusub ee loo sameeyo shaashadaha shaashadda ayaa noo oggolaanaya inaan rogrogo si aan u soo qaadanno waxyaabo dheeraad ah; Tan awgeed, hadda waad ka qaadi kartaa shaashadda dhammaan boggaga iyo barnaamijyada si ballaadhan.
Isbedelka dhameystiran ee cusbooneysiinta cusub ee MIUI 11 ee loogu talagalay shirkadda 'Redmi Note 7' ee shirkaddu waa sida soo socota:
1 É Qué hay de nuevo?
1.1 Naqshad dhammaystiran oo loogu talagalay qalabka shaashadda buuxda
1.2 Codadka dabeecadda
1.3 Share My
1.6 Muuqaalo badan
1.8 Shaashadda qufulka, baarka xaaladda iyo guddiga ogeysiiska
É Qué hay de nuevo?
Naqshad dhammaystiran oo loogu talagalay qalabka shaashadda buuxda
Ka takhalusida jahwareerka muuqaalka, hagaajinta kontaroolada taabashada, iyo turxaan bixinta midabada waxay noo ogolaatay inaan abuurno nidaam aysan waxba ka dhexeyn adiga iyo waxyaabaha ku jira
Ku soo tooso dhawaqyada dabiiciga ah ee dhawaqyadayada digniinta ah.
Dhawaaqyada ogeysiintu kuma caajisi doonaan. Hadda waxay u beddeli doonaan si firfircoon, sida ay dabeecadda u beddesho oo kale.
Ku wareeji faylasha hal telefoon taleefan kale fekerka il biriqsi ah.
Falanqee dukumiintiyada kahor intaadan furin.
Joog wax soo saar iyo waxtar leh Foormlaha Document-ga cusub.
Si toos ah uga daabac sawirada iyo faylasha taleefankaaga adigoon rakibin codsi dheeri ah.
Shaqooyinka: Maamul oo wax ka beddel hawlahaaga qoraalka Qoraalada. Hesho ogeysiisyo waqtiga ku habboon isla markaana hubi howlaha la dhammeeyay.
Jawaab deg deg ah: ka jawaab fariimaha dalab kasta.
Ciyaaraha Turbo: qalabkaaga u rog qalabka ciyaarta ee ugu dambeeya.
Cusub: Tifatirka, wadaagida iyo shakhsiyeynta shaashadahaaga ayaa hada fududaaday.
Iskuduwaha Balastarka amniga Android ayaa la cusbooneysiiyay Nofeembar 2019. Nabadgelyada nidaamka oo la kordhiyay.
Iskuduwaha Shaashadda qufulka ku jira qaabka jeebka.
Shaashadda qufulka, baarka xaaladda iyo guddiga ogeysiiska
Cusub: isticmaal farahaaga si aad u furto daaqada guriga kadib markaad furto qalabka adoo adeegsanaya xogta wajiga oo aad ku hartay shaashadda qufulka.
Cusub: fursado kala duwan si loo qariyo darajada.
Dayactiray: bogga Wi-Fi looma muujin si sax ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Redmi Note 7 waxay helaysaa cusbooneysiin MIUI 11 caalami ah